7 Best Day Trips avy Venice | Save A Train
Home > Travel Europe > 7 Best Day Trips avy Venice
Fotoana famakiana: 6 minitra(Last Nohavaozina: 21/02/2020)
Rehefa mahafantatra rehetra, Venice no Mahafinaritra irery indrindra tanàna amin'ny rehetra Eoropa, raha tsy izao tontolo izao. Ny Italianina nanao izany tanteraka avy amin'ny lakandrano sy ny andinin-tsoratra masina kely, rehetra izay mitoetra eo Amin'ny Nosy Iray. Izany efa niova ny tanàna ao anatin'ny anankiray amin'ireto toerana tsara tarehy indrindra any Eoropa. Fa isika rehetra mahalala fa. Inona no maro no tsy mahalala ny zava-misy fa misy hafa ivelan'ny Venise. That is why we wanted to prepare a list of some of the best day trips from Venice. Tsy ho diso fanantenana misy ireo toerana sy hizaha. Noho izany, Raha liana amin'ny mitsidika toerana mahafinaritra ny sasany amin'ny alalan'ny fiaran-dalamby, Tohizo ny famakiana 7 Best Day Trips Avy Venice In Italia!
1. Ny iray amin'ireo tsara indrindra avy Venice Trips andro dia: Verona
Verona dia mahagaga iray tanàna any amin'ny faritra Veneto, Amin'ny faritra avaratr'i Italia rehetra mahalala. Shakespeare nanao azy mandrakizay rehefa nanapa-kevitra ny hampiasa azy io ho toy ny toerana malaza Romeo sy Juliet milalao. ankehitriny, ny tanàna no tena malaza, ary manana ny zo rehetra hanao ho.
Hahita Verona be tsara tarehy, ary izany no iray amin'ireo toerana tsara indrindra fitsidihana iray andro avy any Venice. Raha te-hiditra any amin'ny alalan'ny fiaran-dalamby, Ho hitanao fa ho safidy tsara indrindra sy haingana rehefa mandeha avy any Venice.
Ireo izay tia Italia mahalala fa Florence no iray amin'ireo toerana tsara indrindra mba hitsidika. Izany koa dia iray amin'ireo toerana tsara indrindra mba hitsidika tamin'ny andro feno lavitra avy any Venice.
Olona maro no hanadinoana ny farany fa afaka tonga avy tany Venise satria somary bebe kokoa izy. Na izany aza, dia afaka hahatratra Florence avy Venise amin'ny adiny roa ihany mitaingina ny fiaran-dalamby haingam-pandeha. toy izany, dia hahita ihany koa ny hahazo ny maro ny mahatalanjona ny endriky ny niparitaka manerana ny tany eo Venise sy Florence.
Ny tena zavatra, dia hahazo ny zavatra niainany tany Florence dia tsara tarehy eny an-dalambe sy ny izao tontolo izao-malaza Florence Cathedral na ny Duomo manao Firenze. Rehefa mandinika izany, Florence Lasa toerana iray tsara tarehy ho an'ny mpandeha rehetra.
3. Ny iray amin'ireo tsara indrindra avy Trips andro Venice: Padua
Tsy ny rehetra mahalala ny momba Padua (Italiana: Padova), nefa mbola misy toerana ho an'ny iray amin'ireo ambony andro fitsangatsanganana avy any Venice. Izany dia satria manana ny zava-drehetra ny tanàna lehibe tanàna Zavatra tokony hanana. Voajanahary isika miresaka momba ny sakafo be, mahatalanjona trano, sy mahatalanjona piazzas.
Ny fandehanana avy any Venice ho Padua dia tratra tsara indrindra amin'ny alalan'ny fiaran-dalamby toy ny mitaingina mandeha amin'ny alalan'ny toerana manaitra sasany any Italia. Plus, izany ihany koa ny aina indrindra sy haingana indrindra safidy misy anao.
Rehefa mahazo ny Padua, Ataovy azo antoka ianao hitsidika Prato della Valle afovoan-tanàna. Izany no iray amin'ireo efamira lehibe ny tanàna, ary izany dia feno tsara tarehy sarivongana tsy misy afaka tsy miraharaha.
Milan ho Padua Lamasinina
Verona ho Padua Lamasinina
Bologna ho Padua Lamasinina
Venice ho Padua Lamasinina
Lake Garda no farihy lehibe indrindra any Italia. Izany ihany koa ny iray amin'ny malaza indrindra. Ary dia manana ny antony rehetra ho. Ny farihy dia voahodidina zavaboary rehetra ny hatsaran-tarehy dia afaka manome. Hahita magnolias, kypreso, hazo voasary makirana, hazo oliva, Dolomite tendrombohitra sy ny sisa maro hafa manodidina Lake Garda.
Afaka hahatratra tanàna maro teo amin'ny amoron'ny farihy avy any Venise. Na izany aza, mahatsapa isika dia nisy roa lahy tsara indrindra avy any Venise andro fitsangatsanganana ho any Lake Garda mila ahitana ny tanànan'ny Peschiera sy Sirmione. Ho tonga izany ary Lake Garda, dia afaka maka ny iray amin'ireo maro fiarandalamby fa ny fialan-tsasatra isan'andro Venice.
5. Ny iray amin'ireo tsara indrindra avy Trips andro Venice: Siena
Tsy ny rehetra mahalala ny momba Siena, fa tsy tanàna iray izay tianao Miss. Izany dia ny kavim-Tuscany sy miavaka tsara tarehy indrindra Moyen Âge tanàna ve dia hahazo hahita.
Ny tanàna kely, fa efa nalaza noho ny cobbled arabe ary ny asa lehibe kianja lehibe fantatra amin'ny anarana hoe Piazza del Campo. koa, ny miavaka Magnia Tower mijoro eo io ihany efamira, ary io no avo indrindra rafitra ho hitanao ao amin'ny Siena.
The mitaingina fiaran-dalamby dia kely tahaka ny tanàna intsony dia lavitra any. Na izany aza, satria Siena kely, dia afaka mbola manana andro mahagaga nandeha avy any Venise raha manapa-kevitra ny handeha any.
Venice ho Siena Lamasinina
Siena dia tsy ny asa lehibe ihany no tanàna in Tuscany. San Gimignano no iray hafa. Samy amin'izy ireo dia Izao tontolo izao UNESCO lova toerana, afa-tsy San Gimignano afaka hanafintohina anao sy ny skyline vita tamin'ny maro tamin'ny Moyen Âge tilikambo. Izany tokoa ny fahitana ny mahita, ary ny iray dia tsy hanadino.
mazava ho, dia afaka mitsidika ny tanàna amin'ny alalan'ny fiaran-dalamby tahaka ny mora indrindra sy haingana indrindra ny fomba hahatratra ny toerana avy any Venise. Inona no more, dia ihany koa ny hahazo hahita ny voalaza etsy ambony mijoalajoala skyline avy amin'ny fampiononana ny maoderina italiana fiaran-dalamby.
Venice any San Gimignano Lamasinina
Trieste no renivohitry ny Friuli Venezia Giulia faritra sy ny lainga eo amin'ny sisin-tanin'i Slovenia. Manana toerana tsy manam-paharoa rehetra an'i Italia sy efa anisan'ny firenena ho zara raha 70 taona. Noho ny izany, Trieste dia tsy manam-paharoa eoropeanina maromaro fifangaroana ny fitaoman-.
Na izany aza, fa Mix no mampanan-izy manokana sy mahatalanjona toerana ny fitsidihana. Afaka tonga mora foana ny tanàna amin'ny alalan'ny fiaran-dalamby avy any Venice. Ny rehetra mitaingina Tena fohy, fa ny zava-dehibe dia tapany fa traverses ny morontsiraka tsara tarehy Italiana. Rehetra izay azo antoka fa mahatonga azy ho tena tsara toerana ny iray amin'ireo andro nivezivezy avy any Venice.
Venice ho Trieste Lamasinina
Roma ho Trieste Lamasinina
Milan ho Trieste Lamasinina
Florence ho Trieste Lamasinina
Key Takeaways About Best Day Trips avy Venice
Rehefa nozohina, Venice lainga no tsara toerana. Mahazo mba handeha tany maro manerana ny toerana mahaliana ny ankamaroan'ny Italia mora foana. Plus, izany mamela toerana ho an'ny andro rehetra ireo nivezivezy avy any Venise sy ny maro hafa.
Raha toa ianao ka vonona ny hanomboka anankiray amin'ireo niainany, rehetra tokony atao dia haka ny toerana tena toerana halehany. Ary izay sisa rehetra fa ianareo no tokony atao dia mandeha any amin'ny fiantsonan'ny fiaran-dalamby. Raha manana fanontaniana fanampiny, dia aza misalasala mifandray Save A Train, Ary isika dia ho faly ny hanampy.
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “7 Best Day Trips Avy Venice In Italia” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-day-trips-venice%2F%3Flang%3Dmg Nyawang- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)